bonke siyabathanda umdlalo Blackjack lonke ihlabathi midlalo. Isizathu olu thando alikho kude-yenze-. Kunye Blackjack kukho into encinane kwisicwangciso ekumiseni Yinxaxheba yakho. Ngenxa yoko, umdlalo Mfono idipozithi Blackjack usebenzisa ifowuni namhlanje.
Inyaniso yokuba thamsanqa asiyiyo yonke lo mdlalo ubeka impumelelo yakho okanye ukusilela emagxeni yakho hayi into zangaphandle. Emveni kweminyaka, abantu abaninzi baye bazama ukwenza ngcono lo mdlalo. Ukuqaliswa kwe-intanethi iye wada wenza esi senzo zande kakhulu.
NetEnt iye nayo yafak kakhulu kakhulu ngokuphathelele kulo. Enye imirhumo yalo yakutshanje ekuphuculeni yedipozithi mfono Blackjack usebenzisa umdlalo emfonomfono Blackjack yi Blackjack Common Zoba Roller High.
Malunga umphuhlisi Blackjack Common Zoba Roller High
Njengoko sele kuchaziwe, NetEnt ke umbhekisi phambili wesi slot. NetEnt na umakhi kumdlalo yaye yabakho ukususela 1996.
Oku kwenza elinye indala ehlabathini kuphuhliso yekhasino online, yesibini kuphela Microgaming. Nangona ekuqaleni ekuqaleni kwale umbhekisi, Kwazeka kuluhlu esidlangalaleni phezu NASDAQ Stockholm OMX kwi 2007. Ixabiso yesabelo layo sele enyuka kancinci, yobungqina umsebenzi eyoyikekayo yenziwe ngulo umbhekisi.
Blackjack Common Zoba Roller ephezulu mfono Blackjack idipozithi usebenzisa umdlalo yefowuni efuna ukuthutha amava yekhasino ilizwe-ofisini yakho kwikhompyutha. Ifuna ukwenza oku ngokusebenzisa ilifa izinto ezoyikekayo ezininzi baqinisekile ukuphucula amava akho udlala nale Blackjack emangalisayo mfono, Deposit mfono Usebenzisa.
Enye yezona iinkalo eyoyikekayo ukuba lo mfono Blackjack dipozithi usebenzisa umdlalo ifowuni anazo kukuba ungakhetha croupier ukuba ukhetha. Niya kuba uluhlu olubanzi iinketho ukusuka amanenekazi enomtsalane ukuba NetEnt ibonelela. Xa ukhethe croupier yakho, kumelwe ukuba kubekho isithuba etafileni yakhe ukuze ubone ukuba uza kukwazi ukudlala khona. Ukuba kukho isithuba esikhoyo, Emva koko ungasonwabela ke amava midlalo eyoyikekayo.
Imithetho le slot ziyafana ukuba ufumana emdlalweni Blackjack classical. Oku kuthetha ukuba kufuneka afumane ixabiso ngesandla ukuba ngaphezu umthengisi ngayo kodwa alikho ngaphezu ezingamashumi amabini ananye. Ukuba ixabiso isandla sakho ngaphezu ezingamashumi mabini ananye, nto ibizwa Bust asuse endlwini.
Blackjack Common Zoba Roller Uphakamileyo kwakuhlaziya umdlalo eyoyikekayo ukuba qiniseka ukunilondoloza qhiwu ikhusi lakho. Dlala mfono Blackjack Deposit Ukusebenzisa mfono ngoku.